Unique IT & Mobile Center - Warranty Policy
All Categories Mobile Phone-- Apple Mobile-- HTC Mobile-- Samsung Mobile
(959) 731 712 12
Sale and Service Warranty Policy
UNiQUE မှ ဝယ်ယူသော ကွန်ပျူတာ (computer)၊ လက်တောပ့် (Laptop)၊ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း (Smart Phone) နှင့် အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများအားလုံးသည် Hardware Warranty နှင့် Service Warranty ဟူ၍ နှစ်မျိုးခံစားခွင့်ရှိပါသည်။ Hardware Warranty ကာလသည် အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်မူတည်၍ ဖြန့်ချီရေးကိုယ်စားလှယ်များသက်မှတ်ပေးသည့် ကာလအတိုင်းဖြစ်ပြီး၊ Service Warranty ကာလသည် တစ်သက်တာအခမဲ့ ဖြစ်ပါသည်။ UNiQUE မှရောင်းချပေးသည့် မည်သည့်ပစ္စည်းမဆို (Lifetime service warranty) တစ်သက်တာလက်ခမဲ့ပြင်ဆင်ခွင့်ဖြင့် ရောင်းချပေးပါသည်။
ပစ္စည်း Warranty နှင့်ပတ်သက်သောစည်းကမ်းချက်များ (Hardware Warranty Policy)
Warranty ကာလမှာ ဝယ်ယူသောပစ္စည်းနှင့် အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်မူတည်၍ ဖြန့်ချီရေးကိုယ်စားလှယ် (Distributor) မှသက်မှတ်ပေးထားသောကာလအတိုင်းဖြစ်သည်။
Warranty ကာလစတင်သည့်နေ့သည် စတင်ဝယ်ယူသောနေ့ကိုသက်မှတ်မည်ဖြစ်ပြီး၊ အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်ပေါ်လာပါက အရောင်းဘောင်ချာ နှင့် Warranty Seal ပေါ်တွင်ရေးသား ထားသော နေ့စွဲကိုသာ Warranty စတင်သည့်နေ့အဖြစ်သက်မှတ်ပါမည်။
ထုတ်လုပ်ခဲ့သော စက်ရုံ၏လိုအပ်ချက်ကြောင့် (Factory Faults) ဖြစ်ပေါ်လာသော ချို့ယွင်းမှုများကိုသာလျှင် Warranty အာမခံဝန်ဆောင်မှုရရှိမည်ဖြစ်ပြီး၊ သုံးစွဲသူ၏ ပေါ့ဆမှု၊ မှားယွင်းမှု (User Fault) ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ပျက်ဆီးချို့ယွင်းမှုများသည် Warranty အာမခံဝန်ဆောင်မှု ခံစားခွင့်ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။
သုံးစွဲသူ၏ ပေါ့ဆမှု၊ မှားယွင်းမှု (User Fault) ဆိုသည်မှာ- ရန်သူမျိုးငါးပါးကြောင့်ချို့ယွင်းခြင်း (ဥပမာ။ ကြွက်ကိုက်သွားခြင်း၊ မီးအားအတက် အကျကြောင့်လောင်ကျွှမ်းပျက်စီးခြင်း၊ ပစ္စည်းများအတွင်း ရေ၀င်၍ပျက်စီးခြင်း၊ အင်းဆက်ပိုးမွှားများ၏ ကျင်ငယ်ရေကြောင့် ပျက်စီးခြင်း၊ ဆားပေါက်၍ ပျက်စီးခြင်း၊ မီးလောင်၍ ပျက်စီးခြင်း၊ မုန်တိုင်းမိ၍ ပျက်စီးခြင်း၊ အစရှိသော ပျက်စီးမှုများ)၊ မတော်တဆလွတ်ကျကွဲခြင်း၊ အက်ကွဲခြင်း၊ အစင်းထင်ခြင်း၊ IMEI/Serial နံပါတ်မျာျးပျက်ဆီးနေခြင်း၊ Warranty Seal များပျက်ဆီးနေခြင်း၊ အသုံးပြုသူမှ ကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ အခြား Service Center တစ်ခုခုတွင်သော်လည်းကောင်း ပြုပြင်ထားခြင်း၊ သက်မှတ်ထားသော Software နှင့် Operating System တို့အား အသုံးမပြုပဲ အခြားတရားဝင်မဟုတ်သော Software နှင့် Operating System များအားအသုံးပြုခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။
Warranty နှင့်ပတ်သက်သော အငြင်းပွားဖွယ်တစ်စုံတရာဖြစ်ပေါ်လာပါက စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
စည်းကမ်းချက်များနှင့်ညီသော ချို့ယွင်းပျက်ဆီးမှုများအားလုံးကို UNiQUE မှ ဝယ်ယူသူမိတ်ဆွေများ နစ်နာမှုလုံးဝမရှိအောင် အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှု ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
မေတ္တာရပ်ခံချက်။ ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ရန်အတွက် Service အပ်နှံသူများမှ အောက်ဖော်ပြပါစည်းကမ်းချက်များကို ကူညီ လိုက်နာပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
Service အပ်နှံသူများနှင့်ပတ်သက်သောစည်းကမ်းချက်များ (Service Policy)
အပ်နှံထားသောစက်တွင် အရေးကြီးသော အချက်အလက်များ (Data) ရှိ / မရှိ၊ ကိုင်တွယ်ရမည့်အချက်များ (ဥပမာ - အသုံးပြုသောဗို့အား) ကို အပ်နှံစဉ် အချိန်တွင် သေချာစွာပြောပြပြီး အပ်နှံပေးရပါမည်။ ထိုကဲ့သို့ အသိပေးအပ်နှံခြင်းမရှိပဲ ပြုပြင်ဆောင်ရွက်မှုပြုလုပ်ပြီးနောက်မှ အချက်အလက်များပျက်ဆီးပျောက်ဆုံးခြင်း၊ စက်၏အစိတ်အပိုင်းများပျက်စီးခြင်း၊ မူလပျက်ဆီးမှု၏နောက်ဆက်တွဲပြဿ နာများကို တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းအချက်များမှလွဲ၍ UNiQUE မှ ပြင်ဆင်မှုပြုရာ တွင် ပေါ့ဆ၊ မှားယွင်းမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပျက်စီးမှုများကို အလုပ်အပ်နှံသူ နစ်နာမှုလုံးဝမရှိရအောင် UNiQUE မှတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။
မူလချို့ယွင်းမှု၏ နောက်ဆက်တွဲ ပျက်ဆီးမှုများအား UNiQUE မှတာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ (ဥပမာ - ပုံမှန်မဟုတ်သောအခြေအနေ သို့မဟုတ် အသုံးပြုနေစဉ် ရပ်သွားသော ကွန်ပျူတာများသည် နောက်ဆက်တွဲ ချို့ယွင်းမှုအဖြစ် နောက်ဆုံး ပါဝါလုံးဝမလာသည်အထိ ဖြစ်သွားနိုင်ပါသည်)
အချိန်တိုအတွင်း ထိရောက်စွာ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်အတွက် အပ်နှံထားသောပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်သော အကျိုးအကြောင်းကို အပ်နှံပြီး (၄၈) နာရီ အတွင်း ပြန်လည်အကြောင်းပြန်ကြားပေးပါမည်။ အကြောင်းပြန်ကြားခြင်းမရှိပါက ဘောင်ချာလက်ခံစာရွက်ပေါ်တွင်ရိုက်နှိပ်ထားသော Service Receipt No. ဖြင့် (၉:၃၀ မှ ၆:၃၀) အတွင်း ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ (ပိတ်ရက်မရှိပါ)
နေရာအခက်အခဲကြောင့် ပြုပြင်ပြီး၍ ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပြီးသော အပ်နှံပစ္စည်းများအား (၂) ပတ်အတွင်း လာရောက်မရွေးယူပါက UNiQUE မှ ၎င်းပစ္စည်းအတွက် တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ရန်သူမျိုးငါးပါးကြောင့် ပစ္စည်းများပျက်စီးပျောက်ဆုံးခဲ့ပါက UNiQUE မှ ၎င်းပစ္စည်းအတွက် တာဝန်မယူပါ။
ပစ္စည်းပြန်လည်ရွေးယူရာတွင် လက်ခံဘောင်ချာ (Service Receipt) ပါလာမှသာလျှင် ၎င်းပစ္စည်းကိုပြန်လည်ပေးအပ်ပါမည်။
လက်ခံဘောက်ချာပျောက်ဆုံးပျက်ဆီးခဲ့ပါက လာရောက်ရွေးသူ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ ပေးအပ်မှသာလျှင် ၎င်းပစ္စည်းကိုပြန်လည်ပေးအပ်ပါမည်။
No 261, Pansodan Road (Upper Block), Between Anawrahta and Bogyoke Road,
Email : sales@unique.com.mm
Web Developer: Myanmars.NET, Yangon, Myanmar. © Copyright 2016 by UNiQUE IT & Mobile.